ခဏခဏရွှေ့နေရာကနေ အပြီးတိုင်ဖျက်သိမ်းတော့မယ်လို့ကြားတဲ့ Justin Bieber တို့ မင်္ဂလာပွဲ •
15/05/2019 lin htet international news 0
Justin Bieber နဲ့ Hailey Baldwin တို့ ဟာ ရိုး ရာ လက် ထပ် ပွဲ လုပ် ပြီး ထိမ်း မြား ပြီး ဖြစ် ပေ မယ့် တ ရား ဝင် မ င်္ဂ လာ ပွဲ မ လုပ် ရ သေး ပါ ဘူး….
သူ တို့ ရဲ့ မ င်္ဂ လာ ပွဲ ကို ဟို နေ့ လုပ် မယ် ဒီ နေ့ လုပ် မယ် ဆို ပြီး ရက် တွေ ရွှေ့ လာ ခဲ့ တာ လည်း သုံး ခါ ထက် မ နည်း ရှိ ပြီ လို့ ဆို ရ မှာ ပါ…
Hailey က လက် ထပ် ပွဲ အ တွက် သ တို့ သ မီး ဝတ် စုံ တွေ ရွေး ပြီး သ တို့ သ မီး အ ရံ တွေ က အ စ ပြော ပြီး ဆိုပြီး ရင် ခုန် စိတ် လှုပ် ရှား စွာ အ စ စ အ ရာ ရာ ပြင် ဆင် နေ ပြီ ဖြစ် ပေ မယ့် စိတ် ကျ ရော ဂါ အ ခြေ အ နေ အ ရ Justin ဟာ လက် ထပ် ပွဲ ကြီး လုပ် ပြီး ပျော် ရွှင် နေ ဖို့ ကို စိတ် အ ဆင် မ ပြေ တာ ကြောင့် လက် ထပ် ပွဲ ကို မ ကြာခ ဏ ရွှေ့ နေ ခဲ့ တာ လို့ သိ ရ ပါ တယ်….
အခုနောက်ဆုံးထွက်လာတဲ့သတင်းတွေအရတော့ Justin ရဲ့ စိတ်အခြေအနေအရ လက်ထပ်ပွဲကိုခဏခဏရွှေ့နေတာမျိုးမလုပ်တော့ပဲ အပြီးတိုင်ဖျက်သိမ်းလိုက်ပြီလို့သိရပါတယ်…
မင်္ဂလာပွဲမလုပ်တော့ဘူးဆိုပေမယ့် Justin နဲ့ Hailey ကတော့ အတူတူဆက်ရှိနေဆဲဖြစ်ပြီး Hailey ကလည်း Justin ကိုနားလည်မှုအပြည့်နဲ့ ချစ်နေဆဲပါပဲ….
ဒါပေမယ့် သိပ်မကြာခင်ရက်တွေအတွင်း Justin က Hailey နဲ့ လမ်းထွက်လာချိန်မှာ အရင်တုန်းက အမြဲတမ်းချစ်ကြည်နူးတစ်တီတူးနေတတ်လေ့ရှိတဲ့ Justin က စိတ်အရမ်းညစ်နေပြီး သူ့ရဲ့အသစ်စက်စက် ဇနီးလေးကို ခပ်ခွာခွာလုပ်နေတာတွေ့ရသလို….
ချစ်စကြင်စအချိန်မှာ နှစ်ယောက်အတူတွဲပြီး ပွဲတွေတက်ရင်းပျော်ရွှင်နေရမယ့်အစား ပြီးခဲ့တဲ့ Met Gala ပွဲကိုလည်း Hailey ကိုတစ်ယောက်တည်းလွှတ်လိုက်တာမြင်ရတာမို့ သူတို့နှစ်ယောက် အဆင်မပြေတော့ဘူးဆိုတဲ့ သတင်းတွေလည်း ပျံ့နှံ့လာခဲ့ပါတယ်….
ဒါ့အပြင် မကြာခင်က The Radar Online ကနေ Selena က Hailey ကို Justin ချစ်တာ ခဏတာလို့ပဲမြင်တယ်ဆိုတဲ့ သတင်းလည်းတက်လာခဲ့သေးတာမို့ ပရိသတ်တွေကြားမှာ Justin တစ်ယောက် Selena ဆီပြန်လာရင် Selena က လက်ခံမှာလားဆိုတဲ့ မေးခွန်းတွေလည်း ဆူညံစွာထွက်ပေါ်နေခဲ့ပါတယ်…..
Justin ရဲ့ မင်္ဂလာပွဲဖျက်သိမ်းလိုက်တယ်ဆိုတဲ့ သတင်းကို Surf The Spear Megazine က ဖော်ပြထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ Justin နဲ့ Hailey တို့ ဇနီးမောင်နှံကတော့ အဲဒီသတင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဘာမှတုံ့ပြန်ရှင်းလင်းခြင်းမရှိသေးပါဘူး….
ပရိသတ်ကြီးရော Justin တို့ မင်္ဂလာပွဲက တကယ်ပဲပျက်သွားတယ်ထင်လား…
ဒါမှမဟုတ် ခဏတာနောက်ရွှေ့ထားတာပဲဖြစ်မလား၊ Justin နဲ့ Hailey တို့ရဲ့ဆက်ဆံရေးကရော Selena မြင်သလို တကယ်ပဲခဏတာပဲလား..ပြောခဲ့ကြပါဦး…
ခဏခဏရှနေ့ရောကနေ အပွီးတိုငျဖကျြသိမျးတော့မယျလို့ကွားတဲ့ Justin Bieber တို့ မင်ျဂလာပှဲ
Justin Bieber နဲ့ Hailey Baldwin တို့ ဟာ ရိုး ရာ လကျ ထပျ ပှဲ လုပျ ပွီး ထိမျး မွား ပွီး ဖွဈ ပေ မယျ့ တ ရား ဝငျ မ င်ျဂ လာ ပှဲ မ လုပျ ရ သေး ပါ ဘူး….
သူ တို့ ရဲ့ မ င်ျဂ လာ ပှဲ ကို ဟို နေ့ လုပျ မယျ ဒီ နေ့ လုပျ မယျ ဆို ပွီး ရကျ တှေ ရှေ့ လာ ခဲ့ တာ လညျး သုံး ခါ ထကျ မ နညျး ရှိ ပွီ လို့ ဆို ရ မှာ ပါ…
Hailey က လကျ ထပျ ပှဲ အ တှကျ သ တို့ သ မီး ဝတျ စုံ တှေ ရှေး ပွီး သ တို့ သ မီး အ ရံ တှေ က အ စ ပွော ပွီး ဆိုပွီး ရငျ ခုနျ စိတျ လှုပျ ရှား စှာ အ စ စ အ ရာ ရာ ပွငျ ဆငျ နေ ပွီ ဖွဈ ပေ မယျ့ စိတျ ကြ ရော ဂါ အ ခွေ အ နေ အ ရ Justin ဟာ လကျ ထပျ ပှဲ ကွီး လုပျ ပွီး ပြျော ရှငျ နေ ဖို့ ကို စိတျ အ ဆငျ မ ပွေ တာ ကွောငျ့ လကျ ထပျ ပှဲ ကို မ ကွာခ ဏ ရှေ့ နေ ခဲ့ တာ လို့ သိ ရ ပါ တယျ….
အခုနောကျဆုံးထှကျလာတဲ့သတငျးတှအေရတော့ Justin ရဲ့ စိတျအခွအေနအေရ လကျထပျပှဲကိုခဏခဏရှနေ့တောမြိုးမလုပျတော့ပဲ အပွီးတိုငျဖကျြသိမျးလိုကျပွီလို့သိရပါတယျ…
မင်ျဂလာပှဲမလုပျတော့ဘူးဆိုပမေယျ့ Justin နဲ့ Hailey ကတော့ အတူတူဆကျရှိနဆေဲဖွဈပွီး Hailey ကလညျး Justin ကိုနားလညျမှုအပွညျ့နဲ့ ခဈြနဆေဲပါပဲ….
ဒါပမေယျ့ သိပျမကွာခငျရကျတှအေတှငျး Justin က Hailey နဲ့ လမျးထှကျလာခြိနျမှာ အရငျတုနျးက အမွဲတမျးခဈြကွညျနူးတဈတီတူးနတေတျလရှေိ့တဲ့ Justin က စိတျအရမျးညဈနပွေီး သူ့ရဲ့အသဈစကျစကျ ဇနီးလေးကို ခပျခှာခှာလုပျနတောတှရေ့သလို….
ခဈြစကွငျစအခြိနျမှာ နှဈယောကျအတူတှဲပွီး ပှဲတှတေကျရငျးပြျောရှငျနရေမယျ့အစား ပွီးခဲ့တဲ့ Met Gala ပှဲကိုလညျး Hailey ကိုတဈယောကျတညျးလှတျလိုကျတာမွငျရတာမို့ သူတို့နှဈယောကျ အဆငျမပွတေော့ဘူးဆိုတဲ့ သတငျးတှလေညျး ပြံ့နှံ့လာခဲ့ပါတယျ….
ဒါ့အပွငျ မကွာခငျက The Radar Online ကနေ Selena က Hailey ကို Justin ခဈြတာ ခဏတာလို့ပဲမွငျတယျဆိုတဲ့ သတငျးလညျးတကျလာခဲ့သေးတာမို့ ပရိသတျတှကွေားမှာ Justin တဈယောကျ Selena ဆီပွနျလာရငျ Selena က လကျခံမှာလားဆိုတဲ့ မေးခှနျးတှလေညျး ဆူညံစှာထှကျပျေါနခေဲ့ပါတယျ…..
Justin ရဲ့ မင်ျဂလာပှဲဖကျြသိမျးလိုကျတယျဆိုတဲ့ သတငျးကို Surf The Spear Megazine က ဖျောပွထားခဲ့တာဖွဈပါတယျ။ Justin နဲ့ Hailey တို့ ဇနီးမောငျနှံကတော့ အဲဒီသတငျးတှနေဲ့ပတျသကျပွီး ဘာမှတုံ့ပွနျရှငျးလငျးခွငျးမရှိသေးပါဘူး….
ပရိသတျကွီးရော Justin တို့ မင်ျဂလာပှဲက တကယျပဲပကျြသှားတယျထငျလား…
ဒါမှမဟုတျ ခဏတာနောကျရှထေ့ားတာပဲဖွဈမလား၊ Justin နဲ့ Hailey တို့ရဲ့ဆကျဆံရေးကရော Selena မွငျသလို တကယျပဲခဏတာပဲလား..ပွောခဲ့ကွပါဦး…
သူငယ်တန်းမတက်ရသေးသည့် အသက်(၆)နှစ်ပြည့်ကလေးများကို ပထမတန်းသို့ တက်ခွင့်ပြု …